Izinto zokuvala izinto ezishushu zokwenza izinto kunye nababoneleli - iTshayina lokuThintela izinto eziHrayo zase China
Ingubo yefayibha yengubo
Ingubo ifayibha ingubo yenziwa yi-lobushushu eliphezulu ukunyibilika ukutshiza okanye ukusonta izinto ekrwada zibe yimicu, kwaye yenziwa kabini-macala inaliti Ukuhlukunyezwa. Umbala umhlophe, ubungakanani buqhelekile, kwaye buhlanganisa ukumelana nomlilo, ukufudumeza ubushushu kunye nemisebenzi yokugcina ubushushu. Ingubo ifayibha ingubo unako ukugcina amandla eqine elungileyo, ubulukhuni kunye nesakhiwo ifayibha xa kusetyenziswa umoya cala oxidizing.
Ingubo yoboya beRwala inentsebenzo elungileyo yokugquma ubushushu, ulwakhiwo olufanelekileyo kunye nofakelo, isiphumo sokugcina amandla, kunye nokusebenza kweendleko eziphezulu; Ingubo yoboya bengxondorha luhlobo lwento yokwambathisa obushushu kunye nokuqhuba okuphantsi kobushushu. Ilungele iipayipi ezinkulu neziphakathi; iitanki zokugcina eziphakathi nezincinci kunye nezixhobo ezinendawo encinci egosogoso okanye imigangatho engagunyaziswanga, ukwakha umbhobho womoya wokufakelwa kombhobho kunye nokulwa nombethe, kunye nokufakwa kwesandi kunye nokugquma kweendonga.
Rock iingubo uboya iimveliso zisebenzisa abangelwe njengoko izinto ekrwada, nto leyo eye elungileyo non-ukutsha, kwaye indawo ukunyibilika ingaphezulu kwe-1000℃. Isebenza ngokukuko ekubambeni ubushushu kunye nokuthintela umlilo, ukunciphisa okanye ukufunxa ingxolo.
IBhodi yodongwe ifayibha
Ibhodi yefayibha yeCeramic yenziwe ngomqhaphu we-ceramic fiber njengempahla eluhlaza, ukongeza inani elincinci le-organic kunye ne-inorganic binders kunye nezinye izongezo, kusetyenziswa ulawulo oluzenzekelayo ngokupheleleyo, imveliso eqhubekayo, kunye nomgca wokuvelisa ohambelanayo netekhnoloji ephezulu. Amandla ebhodi yefayibha yodongwe aphezulu kunalawo eengubo zefayibha kunye nezinto ezenza inkunkuma, kwaye ilungele amasimi obushushu aphezulu afuna ukuqina namandla emveliso. Umphezulu tyaba, ubungakanani ichanekile, ubulukhuni ilungile, oko kunqunyulwa ngokuthanda, kunye nefuthe ubushushu ulondolozo kakhulu. Iyafana ngaphakathi nangaphandle kwaye inentsebenzo elungileyo yokugquma ubushushu. Ibhodi yefayibha yeCeramic yindawo efanelekileyo yokugcina ubushushu kunye nezinto zokugquma ubushushu kwiikhilnikhi ezahlukeneyo zeshishini.
Rock iingubo uboya iimveliso zisebenzisa abangelwe njengoko izinto ekrwada, nto leyo eye elungileyo non-ukutsha, kwaye indawo yokunyibilika ingaphezulu kwe-1000 ℃. Isebenza ngokukuko ekubambeni ubushushu kunye nokuthintela umlilo, ukunciphisa okanye ukufunxa ingxolo.
IPhepha leFayibha yeCeramic
Iphepha le-Ceramic fiber lenziwe ngokusulungeka okuphezulu kwealuminiyam ifayibha yodongwe ngenkqubo yokwenza emanzi. Ifayibha ephezulu yodongwe isetyenziselwa ukutshiza umqhaphu, othi ube ngumgangatho ophezulu wefayibha ngokucoceka okuphezulu ngokutyumza, ukuhambisa kunye nenkqubo yokususa i-slag, kunye nokuncamathelisa okungxubileyo kuyongezwa ukwenza iphepha lomgubo. Emva komshini wokwenza umgubo omde womnatha, uyomiswa ngokufanayo yi-microwave, emva koko yaqengqelwa kwaye yafakwa kwiibhokisi. Ihlala isetyenziswa kumacandelo ahlukeneyo anje ngemveliso yeekhemikhali, ishishini lokwakha, ishishini le-elektroniki, ishishini learospace, ishishini lezomkhosi, umoya opholileyo kunye nefriji.
Imodyuli yeCeramic Fibre
Imodyuli yefayibha yodongwe luhlobo olutsha lwemveliso yelinen eyenzelwe ukwenziwa lula kunye nokukhawulezisa ulwakhiwo lweziko kunye nokuphucula ukuthembakala komgangatho. Imveliso imhlophe ngombala kwaye ubukhulu bayo buqhelekileyo. Inokulungiswa ngokuthe ngqo kwizikhonkwane ze-anchor zesitya sensimbi seqokobhe leziko lezemveliso. Inesiphumo esihle sokumelana nomlilo kunye nokufudumeza ubushushu, okuphucula ukuthembeka kwesithando somlilo esinganyangekiyo kunye nokukhuthaza ubushushu kwaye ikhuthaze inkqubela phambili yetekhnoloji yokwakha umlilo.
Yodongwe Ifayibha Bulk
Iiceramic fiber yomqhaphu yifayibha eshushu eneqondo lobushushu eliphezulu eyenziwe ngezinto ezisulungekileyo ezisulungekileyo ngobushushu obuphezulu obunyibilikayo, kusetyenziswa ukuvuthela okanye ukujija itekhnoloji. Ifayibha inokuzinza kweekhemikhali kwaye inokumelana nokhukuliseko lweekhemikhali ezinobundlobongela. Nokuba imveliso egqityiweyo ifakwe i-oyile, amanzi okanye umphunga, iipropathi zayo ezinje ngeqondo lobushushu kunye nokugquma kobushushu ngekhe kutshintshe. Ifayibha yomqhaphu ingaqhubekeka phambili yenziwe ngengubo yefayibha, yaziva, ibhodi, iphepha, ilaphu, intambo kunye nezinye iimveliso.
Iifayile zeCeramic Fiber
Izambatho zefayibha zeceramic zenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu zefayibha, izinto zeglasi okanye ucingo lobushushu olunganyangekiyo njengezinto zokuqinisa, ifayibha yodongwe iphothwe kwintambo, kwaye iinkqubo ezahlukeneyo zamalaphu kunye nezixhobo zisetyenziselwa ukwaluka kwilaphu, ibhanti, intambo kunye ezinye iimpahla zefayibha zeceramic. Inentsebenzo elungileyo yokugquma ubushushu, ephezulu kwimveliso yefayibha yodongwe efana namandla aphezulu, ukungqinisisa ukungcangcazela komatshini kunye nokuchasana nefuthe.
Ingubo ifayibha enyibilikayo
Ingubo ifayibha enyibilikayo, xa kuthelekiswa nezinto zemveli ifayibha izinto, umxholo izinto non-imicu kuncitshiswe kakhulu, nto leyo ukwandisa umxholo ifayibha nge-20%, kunye nokusasazwa ifayibha kusengqiqweni kakhulu kwaye efanayo, ukuqinisekisa ukuba imveliso a conductivity thermal esezantsi ; ububanzi befayibha buncipha kwaye isandla siziva ngakumbi Ithambile kwaye inokunciphisa ukucaphuka kulusu lwabantu ngexesha lokusetyenziswa kwemveliso. Kuba inokunyibilika ngokwaneleyo kulwelo lomzimba womntu ukuyenza ihlale emzimbeni womntu ixesha elincinci, ayizukubangela monakalo kwimpilo yabantu, ubuncinci iya kunciphisa umonakalo kwimpilo yabantu ukuya kubuncinci, ke oko kubizwa ngokuba kukunyibilika. ifayibha.
IBhodi ifayibha Soluble
Ibhodi yefayibha enyibilikayo yenziwe nge-cotton fiber enyibilikayo, iifilitha ezingafakwanga, isixa esincinci sezibophelelo eziphilayo kunye nezibophelelo ezingaphiliyo, kwaye inezinto zokugquma ngokugqwesileyo kunye neepropathi zokulungisa.
Iphepha leFayibha elinyibilikayo
Iphepha ifayibha enyibilikayo yenziwe ezikumgangatho ophezulu ifayibha enyibilikayo ifafazwa umqhaphu, emva kokutyunyuzwa kunye nokubetha, amaxesha 6 inkqubo ukususwa zeBlack ukuba abe high-ntumbuluko ifayibha ezikumgangatho ophezulu, ukongeza isibopheleli exutywe ukulungiselela intlama, ezine pulonier ido- isicoci-kwasekwa, emva microwave Emva kokuba yomiswe ngokulinganayo, qengqa kwaye upakishe. Iphepha le-Ceramic fiber lihanjiswa ngokulinganayo, amandla aphezulu aphezulu, ukuguquguquka okuhle, akukho kubekwa, akukho slag, kwaye kunqunyulwa ngokuthanda.
Iphepha lesinyibilikisi esinyibilikayo yimveliso yokhuselo lokusingqongileyo eluhlaza enokuboliswa ziintsholongwane, ngaphandle kokucaphuka okanye ukwenzakala emzimbeni womntu nakwimeko-bume. Yimveliso ekhusela ubushushu becalcium-magnesium eveliswe ngokusebenzisa itekhnoloji yemveliso yamvanje kunye nezinto ezikumgangatho ophezulu wokudibanisa.
IBhodi yeCalcium Silicate
Ibhodi ye-calcium silicate, ekwabizwa ngokuba yi-asbestos-free calcium silicate board, yinto emhlophe, enzima yokufaka ubushushu.
Izinto ezingafunekiyo zebhodi ye-asidi ye-calcium zizinto zesiliceous (i-quartz powder, i-diatomaceous earth, njl.njl.), Izinto ezinomdla (isamente, ikalika, njl. , kunye nomphezulu wesanti weepaneli ezilula.